Amabhethri glucometer van touch khetha > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ukubhoboza oluzenzakalelayo onama-lancets alahlekayo angcono kunenketho engcono kakhulu yensimbi yokwenza isampula yegazi yokuhlola ushukela ekhaya. Imitha ngayinye inezimpawu zayo kulokhu, futhi i-OneTouch ayikho. Imvamisa kuyadingeka ukuthatha izilinganiso zesifo sikashukela, izindleko zokudla zingama-athikili abalulekile kwisabelomali saso, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuqonda lolu daba.
Ukuchazwa kwe-OneTouch Auto Discount
Ipeni ye-OneTouch yakhelwe ngqo ukuthatha igazi le-capillary ngemitha yegama elifanayo. Ukusetshenziswa kwalesi sibhobo kanye namalashini we-van touch khetha i-glucometer kudala zonke izimo zokuhlaziywa okuphephile nokungenabuhlungu.
Phakathi kwezinzuzo ze-OneTouch auto-puncturer:
Ukulungiswa kokujula kokuhlasela. Idivayisi ifakwe umlawuli okuvumela ukuthi ulungise le nkomba kusuka ku-1 kuye ku-9, kuye ngezimpawu zesikhumba.
I-cap eyengeziwe yokusampula kwegazi kusuka kwezinye izindawo.
Ukukhishwa okungekho kokuxhumana kwezihluzi ezingaxhunyiwe.
Kwezinye izimo, izinkomba zamamitha lapho uthatha uketshezi lwezinto eziphilayo kusuka eminweni luyehluka ngokulinganisa endaweni yezindawo ezihlukile. Imvamisa, umehluko obalulekile ubonwa ngokushintshwa okubukhali kokugxila kwe-glucose ngemuva kokudla ama-carbohydrate, ukuqongelela umthamo ohleliwe we-insulin, nemithwalo yemisipha emibi. Lapho i-biomaterial ithathwa emunweni, umphumela ushesha ukwedlula kusuka engalweni noma kwezinye izindawo. Lokhu kubaluleke kakhulu ezimweni ze-hypoglycemic.
Ungayisebenzisa kanjani i-OneTouch sampling lancets
Imiphumela yokuhlola etholakala kakhulu itholakala ngokulinganisa igazi lokuzila (ushukela wokuzila) noma amahora ama-2 ngemuva kokudla (ushukela we-postprandial). Ngokuthwala ngokweqile ngokomzwelo, ngokomzimba, ukuphazamiseka kokulala, amazinga kashukela nawo angashintsha.
Ungayithola kanjani i-biomaterial kusuka emunweni:
Faka i-OneTouch Scarifier. Susa ikepisi eliluhlaza okwesibhakabhaka kusuka ekuzijobeni okuzenzakalelayo ngokulijika elizungeze i-axis yalo. Inaliti kufanele ibekwe kwisibambi, isisunduza yonke indlela ngomzamo kuze kube yilapho umsindo uchofoza. Ukujikelezisa isinciphisi akunconyiwe.
Ukulungiswa kokujula Ngokunyakaza okujikelezayo, kuyadingeka ukususa inhloko evikelayo elondeni bese ubeka esikhundleni isiciko sokubhoboza okuzenzakalelayo. Akufanele ukukhipha ikhanda elivikelayo; lisasebenza lapho kulahlwa inaliti. Ngokujikeleza i-cap ngokwewashi, ungangezela ukujula kokuhlasela ngokuhambisana nezimpawu zesikhumba endaweni yokulawula. Izinga eliphansi (1-2) lilungele isikhumba somzimba omncane, izinga eliphakathi (3-5) lisesandleni esijwayelekile kanti esiphezulu (6-9) yiminwe emincane engabizi.
Ilungiselela ukukhishwa. Isishubisi se-trigger kumele sidonswe emuva yonke indlela. Uma isinali lingazwakali, khona-ke ucingo seluvele selulungile esigabeni sokufakwa kwesinciphiso.
Ukwenza ukubanjwa kwesikhumba. Lungisa izandla zakho ngokuzigeza ngamanzi afudumele wesepha bese wazomisa ngenwele yezinwele noma zomile ngokwemvelo. Khetha isiza sokuhlaziywa, usiguqe kancane. Namathisela isibambo kule ndawo bese ukhipha inkinobho. Inqubo ngeke ibe buhlungu futhi iphephe uma uguqula kokubili i-lancet kanye nendawo ye-biomaterial ngendlela esheshayo.
Ukulahlwa kwesikhafu. Kule modeli, i-lancet esetshenzisiwe iyasuswa kanye nekhanda elivikelayo. Ukuze wenze lokhu, susa ichopho, faka inaliti kwidiski bese ucindezela phansi. Faka isinciphiso phansi futhi kude nawe. Ngemuva kokuhambisa i-lever cocking leward phambili, inalithi iqhubekela emgqonyeni kadoti. Ekupheleni kwenqubo, i-lever isethwe endaweni ephakathi. Ithiphu ye-auto-piercer ifakiwe.
Ukukalwa kwegazi kuseduze
Kwesinye isikhathi ukulimala komunwe okungapheli kuyinto engathandeki kakhulu, ngokwesibonelo, kubaculi. Ukusetha okuphelele kwensiza kuvumela amasampula egazi hhayi kuphela kusuka emunweni, kodwa futhi kusuka engalweni, izicubu ezithambile zezandla. Ngokuvamile, i-algorithm iyafana, kepha kusetshenziswa i-nozzle ekhethekile yalokhu.
Ukufakwa kwethiphu. Ngemuva kokulungisa isikhwehla, kuyadingeka ukufaka esikhundleni sombala oluhlaza okwesibhakabhaka we-auto-ocacile, owenzelwe isampula yegazi engalweni noma engalweni. Uma kunesidingo, ukujula kokuhlasela nakho kungalungiswa.
Ukuzikhethela kwendawo okuhlaselayo. Khetha izicubu ezithambile esandleni, uvikele ukuhlangana, izinhlangothi ezinezintambo zezinwele nenethiwekhi ebonakalayo yemithambo.
Isakhiwo sokuhlunga. Ukuze uthuthukise ukuphuma kwegazi, ungafaka ukushisa endaweni ekhethiwe noma uyihlikihle ngobumnene.
Ukwenza inqubo yokubhula. Cindezela isibambo ngokuqinile endaweni ekhethiwe kuze kube yilapho isikhumba sibe mnyama ngaphansi kwekhwapha, bese ucindezela inkinobho efanayo yokuvala. Ngale ndlela, ukuhanjiswa kwegazi kuyanda endaweni yokubhoboza.
Lindela ithonsi legazi ukuba lakhiwe ngaphansi kwekholomu ebonakalayo. Akunakwenzeka ukuphoqa imicimbi, ngoba kusuka ekucindezelweni okuqinile igazi lingcoliswe uketshezi lwe-intercellular, luhlanekezela imiphumela yokulinganisa. Ithonsi lokuqala livame ukususwa nge-disc eyinyumba. Ukuhlaziywa komthamo wesibili kuzoba okunembile ngokwengeziwe. Uma kudonswa ithonsi noma igazi lisakazeka, akusasifanele ukuhlaziya.
Ukusetshenziswa kokwehla okuphumayo. Ngemuva kokuhoxisa ukubhoboza, udinga ukuthinta okuya phansi kuze kube sekupheleni komucu wokuvivinya kuze kube yilapho uthuthela ngokuzenzakalelayo endaweni yokwelashwa. Uma lokhu kungenzeki ngaphakathi kwemizuzu engu-3, ​​idivaysi izocisha ngokuzenzakalelayo. Ukuyifaka esimeni sokusebenza, udinga ukukhipha umucu wokuhlola bese uyifaka kabusha.
Iphuzu aligcini nje ukuthi izinaliti zeVanTouch Khetha i-glucometer ngokusetshenziswa okuphindaphindiwe zingabi bukhali, futhi ukubhoboza kube buhlungu. Ngemuva kokuhlaziywa, iminonjana yegazi ihlala kuma lancets - indawo ekahle yokuthuthukiswa kwamagciwane. Ukugwema ukutheleleka, izinaliti kufanele zichithwe ezitsheni ezibukhali ngesikhathi, futhi ukufakwa okusha kwe-silicone kufanele kuvulwe ngokushesha ngaphambi kokusebenzisa.
Ngaphezu kwamanqina, i-auto-pierer nayo idinga isimo sokucophelela. Uma kunesidingo, ingagezwa ngegwebu lesosi. Ukuze kutholakale amagciwane omzimba, kusetshenziswa i-bleach yasendlini, kuyincibilikisa emanzini ngesilinganiso esingu-1: 10. Kulesi sixazululo kuyadingeka ukuthambisa i-gauze swab bese usula konke ukungcola. Ngemuva kokubulala amagciwane, hlambulula zonke izingxenye zesibambo ngamanzi ahlanzekile bese womile.
Impilo yamashalofu yomakhiqizi wamanoni uJohnson noJohnson isethwe kungakapheli iminyaka emi-5. Izinto ezisetshenzisiwe eziphelelwe yisikhathi azikwazi ukusetshenziswa, izinaliti ezinjalo kufanele zichithwe. Sebenzisa izikhafu zaseMelika kuphela nge-One Touch pier.
Okokufaka okokulengisa kwemitha eyodwa yokukhetha ukuthinta, intengo incike kwinani lokusetshenziswa: ibhokisi ngalinye elinama-25 ama-pcs. Udinga ukukhokha ama-ruble angama-250., Kuma-100 ama-PC. - Ama-ruble angama-700., Ama-lancets ayi-100 touch eyodwa yokuthinta - ama-ruble ayi-750. Ipeni ye-lancet yama-lancets van touch khetha izindleko ezingama-750 ruble.
Uma kunengozi yokuqhamuka ne-hypoglycemia (ngokwesibonelo, ngokuphathwa okungalawulwa kwe-insulin esebenza ngokushesha, ngezinkinga ze-asymptomatic noma ukonakala kokuphila kahle ngenkathi ushayela), kungcono ukusebenzisa iminwe yakho ukuhlaziya ikhaya, ngoba ukuhlaziywa kwegazi okunjalo kuzoshesha futhi kunembe kakhudlwana. Ngemuva kwemizuzwana emi-5, ungathembela kumphumela. Uma ushukela weqa kakhulu, le ndlela nayo izoba ngcono.
Kokubili ukubhoboza okuzenzakalelayo kanye nama-lancets kuhloselwe ukusetshenziswa komuntu ngamunye, ngisho namalungu omndeni akufanele anikezwe ihlaziyo okwesikhashana, ikakhulukazi ipeni elinelancet.
Shintsha indawo yokubhoboza ngesilinganiso ngasinye esilandelayo. Uma ama-hematomas noma ezinye izilonda zesikhumba kwenzeka, ungasebenzisi le ndawo ukuthola ama-puncture amasha.
I-Thinta eyodwa Khetha i-glucose analyzer idinga u-1.0 μl. Mhlawumbe, lapho uhlola i-biomaterial kusuka engalweni noma engalweni, kuzodingeka ukwandisa ukujula kokuhlasela nesikhathi sokuthola umthamo owanele wethamo.
I-auto-piercer kanye nezinsimbi zokuhluza kufanele ihlale ihlanzekile futhi ekushiseni kwegumbi, kusetshenziswa inalithi entsha isikhathi ngasinye ukuthola izilinganiso.
Ngaphambi kokuthola amasampula egazi akho okuqala, ikakhulukazi avela kwezinye izindawo, thintana nodokotela wakho we-endocrinologist.
Ungayikhetha kanjani i-glucometer ekhaya?
Izinhlobo ezi-1 zama-glucometer
1.1 I-Photometric glucometer
1.2 Ama-glucometer we-Electrochemical
2 Izinhlobo ezithandwayo nabakhiqizi
Ama-3 Glucometer ngaphandle kokufaka amakhodi nemichilo yokuhlola
4 Amamitha kashukela egazi
5 amasongo wokuhlaziya
6 imitha kashukela wegazi
7 Izinsimbi ezinembile kakhulu
8 Yini okufanele uyibheke lapho ukhetha i-glucometer?
Isifo sikashukela sidinga ukubhekwa njalo kwe-glucose egazini. I-gluroeter ye-electrochemical noma idivaysi ye-electrochemical analyzer ingasiza ukubhekana nomsebenzi. Uhla olukhulu lwama-glucometer likuvumela ukuthi ukhethe kahle idivaysi efanelekile yesiguli ngasinye. Ukukhetha okulungile kubalulekile, ngoba ukunethezeka kwansuku zonke nempilo yoshukela kuncike kukho. Ngaphambi kokuya ekhemisi, kungcono ukuthi uzijwayeze ngezinhlobo zemishini yezokwelapha.
Ngokomgomo wokusebenza, wonke ama-glucometer ahlukaniswe izinhlobo ezimbili - i-photometric ne-electrochemical. Yikuphi i-glucometer elula kunazo zonke, akunakwenzeka ukuphendula ngokungalingani, ngoba ezigulini imibandela yokwenza kube lula ekhaya yehlukile. Izidingo zensimbi azinakushintshwa ngokuya ngemininingwane yobuchwepheshe kanye nentengo. Okwekhaya, kuyanconywa ukuthi ungathengi ithuluzi elibiza kakhulu, kepha ngokunemba okuphezulu, okubalulekile, ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela esinezifo ezingamahlalakhona. Ungajwayelana nemingcele yedivayisi ngokuhlola okufakwa. Naka ukunemba kwesilinganiso, umenzi, kanye nemininingwane efana nezindleko zezinto ezidliwayo ngendlela yamachashazi wokuhlola. Ngezindleko eziphansi zedivayisi nentengo ephezulu yokudla, inzuzo yezomnotho kusukela ekuthengeni izoba mincane.
Izisetshenziswa zalolu hlobo zincike ekuhlanganyeleni ushukela wegazi ngama-reagents emisetshenzisweni yokuhlola futhi zithathwa njengokuphelelwe ukusetshenziswa ekhaya. Ukulinganiswa kwama-glucometer anjalo kwenziwa egazini le-capillary. Ukuthola izinga le-glucose, inqubo ebuhlungu iyenziwa ebangela ukuphazamiseka okwengeziwe. Ngakho-ke, iziguli ezinokuzwa kwemijovo zingcono ukukhetha uhlobo oluhlukile lwedivayisi.
Okunembile kakhulu kubhekwa i-electrochemical glucometer.
Ukuhlola izinga likashukela usebenzisa i-electrochemical analyzer, uzodinga nomucu wokuhlola, kepha umphumela wokuhlaziywa kuwona uzotholwa ngenxa yokusabela kwamanje ngemigudu yendawo yokuhlola. Le ndlela yenza ukuthi sikwazi ukubona kahle ushukela, ngoba amadivayisi awavikelekile ezintweni zangaphandle. Amadivayisi we-electrochemical yanamuhla alinganiswa yi-plasma, ethinta ikhwalithi yokuhlaziywa futhi inikeze umphumela onembile kunayo yonke. Amadivayisi asuselwa kunqubo yokuhlonza kagesi athandwa kakhulu, abhekwa njengabizi futhi abonakala ngamasampula aphezulu.
Iphutha ekulinganiseni ushukela wegazi akufanele lidlule i-15%. Umehluko omuhle kakhulu wokufundwa kwedivayisi nokuhlaziywa kwelabhoratri usuka ku-5 uye ku-8%.
Amamodeli athandwayo nabakhiqizi
Phakathi kokuhlukahluka okuningi kwama-glucometer, amamodeli we-multimeter anomsebenzi wokusebenza okuningana, ukuhambisana kwezwi nesikrini esinamanani amakhulu aziwa. Lokhu kwenza ukuthi le divayisi ibe yindawo yonke kubantu abakhubazekile kanye neziguli esezikhulile. Kumadivayisi asebenza ngemisebenzi eminingi, imodeli ye-EasyTouch iyathandwa. Le divayisi elula inquma ukubalwa kweshukela nokuhambisana negazi: i-cholesterol ne-hemoglobin. Adumile ngokufanayo amadivayisi wohlobo lwe-Accu Chek: TD-4227A ne-touch eyodwa. Le mishini eguquguqukayo ibonakala ngokusebenza okusheshayo nokunemba okuphezulu, okugcinwa kuyo ukuthengiswa okuphezulu.
Umuntu onamehlo ampofu futhi akaboni abantu abakhubazekile udinga i-apparatus enezwi elizwakalayo. Imodeli edumile - uClever Chek. Idivayisi ifunda imingcele yokuhlaziywa futhi inemibhalo elula. Kunamamodeli lapho wokulinganisa ngemodi yokuthinta izinkinobho zimakwe nge-braille. Amadivayisi amasha ezimpumputhe ayahlasela, futhi awadingi ukufaka isampula yegazi, kanye nokufakwa esikhundleni kwamachashazi okuhlola noma amakhasethi, ngoba le nqubo ibangela ukuphazamiseka okwengeziwe kubantu abanombono ophansi.
Ama-Glucometer ngaphandle kokufaka amakhodi nemichilo yokuhlola
Idivayisi enjalo ilusizo kulabo abangasebenzisi imicu yokuhlola njalo.
Isidingo esihlala sikhona sokusebenzisa imichilo yokuhlola kumadivayisi we-electrochemical anciphisa ukuhamba kwesifo sikashukela, yingakho i-glucometer ngaphandle kokufaka amakhodi idumile kakhulu kubantu abangakwazi ukukala njalo besebenzisa imichilo. Ukufaka amakhodi kubuye kube yinkinga ngoba uma ukhohlwa ukuqinisekisa ikhodi lapho ufaka umucu nezinkomba ezikrinini semitha nedatha esephaketheni, athola ukuhlaziywa okungalungile.
Amadivaysi angenamachilo wokuhlola afakelwe izigubhu ezijikelezayo ngetheyipu esetshenzisiwe neyodwa ehlanzekile, ekuvumela ukuthi uhlale unetha lokuphepha uma ngabe itheyiphu iphela, futhi uqhathanise nezinguquko zokushintsha ushukela ngenxa yohlobo lokuhlaziywa kokugcina umlando. Izisetshenziswa ngaphandle kwemivimbo azinakubumbana kangako kunama-analogs ngemivimbo futhi anezici ezifanayo zokukala ukunemba.
Inqubo yokujova yeziguli eziningi ibangela ukungahambi kahle nobuhlungu. Ikakhulu inqubo ayijabulisi ezinganeni. Ukusiza ukubhekana nokwenqena ukuqapha ushukela kushukela, kuye kwenziwa ama-glucometer akamuva angahlaseli. Indlela yokuhlaziya ngaphandle kwegazi iya ngokuya ithandwa. Inoveli ebizwa ngeFreeStyle Libre iyatholakala kwi-Intanethi. Idivaysi ihlaziya ngaphandle kokufaka amasampula egazi, yenza ukubonga okuphelele kokubhekisisa izindlela zakamuva. Ukunemba kungu-11.4%, okuyisinkomba esihle. Imitha ibekwe ehlombe kusetshenziswa umfakisicelo okhethekile futhi ilungele ukuhamba ngehora.
Idivayisi izoba wusizo ezinganeni, ngoba ivunyelwe ukusetshenziswa kusuka eminyakeni engu-4. Futhi yiyona ndlela engcono kakhulu yeziguli esezikhulile. Ukufakwa emzimbeni kubuhlungu futhi kuthatha imizuzwana eyi-15. Idivaysi ephathekayo ephathekayo ayizibambeki izingubo futhi ayinciphisi ukunyakaza, ayibangeli buhlungu ngenkathi isebenza. Imininingwane ifundwa inombolo engenamkhawulo yezikhathi, enikeza izinzuzo ezingezekile, ngoba imichilo yokuhlola ayisadingeki.
Idivayisi enjalo iyasiza kubantu abahola indlela yokuphila esebenzayo.
Ipharamitha ebalulekile yemitha ukufakwa ekhweni, ukuhamba, usayizi kanye nokulula ukusetshenziswa ekhaya. Elifanele kulezi zinhlaka yithuluzi lesizukulwane esisha saseJapan elibukeka njengesongo sokuqina. Ukuqapha izinga le-glucose kusongo kuyazenzakalela futhi kwenziwa ngemuva. Imodeli ilungele umuntu ohola indlela yokuphila esebenzayo. Lezi zinhlobo zama-glucometer zisebenzisa indlela yokuxilonga i-laser futhi azidingi amasampula egazi, futhi azidingi ukufaka ikhodi okungeziwe.
Isithandwa esingaphansi kwesongo esihlakaleni yi-glucometer ekwakhekeni kwepeni futhi inenalithi e-Accu-Chek Multiplex emincane kakhulu. Elula ukusetshenziswa ekhaya nasendleleni. Ububanzi benaliti bungama-0,3 mm, inaliti ine-blade sedrama, futhi inqubo yokulinganisa igazi ayibuhlungu. Isikrini sedivayisi sinikeza ukubuka okubanzi. Izindleko eziphansi ngokuqhathaniswa zedivayisi nenani lephutha eliphansi ekuhlaziyeni zenza idivaysi ithandwa. Nge-glucometer, ipeni lithathwa emunweni, ehlombe, emlenzeni, esiswini nakwezinye izingxenye zomzimba.
Izinsimbi ezinemba kakhulu
Izinhlobo zamanje zamadivayisi zikuvumela ukuthi unqume kahle ushukela ekhaya ngephutha lokufika ku-15%. Lokhu akulona izinga eliphakeme kakhulu njengokuhlolwa kwegazi lochwepheshe kwelebhu, kodwa kusiza kakhulu futhi kushesha, ngoba ukuhlaziya kwenziwa ngokuzenzakalelayo. Ukuphakama kwokunemba kwensiza kanye nesivinini sokuthola umphumela, kubiza kakhulu intengo.
Idivayisi yeSatellite ilungele abantu abanenkambo elula yesifo.
Ukuqhathaniswa kwama-glucometer ngokunemba kukhulumela amamodeli we-electrochemical, kanye namagajethi amasha angahlaseli ngendlela yamawashi noma izitikha. Amamodeli afakiwe alungele abanesifo sikashukela abadinga ukuhlaziywa okunembile; ukuqapha ushukela nsuku zonke, abantu abangenalo uhlobo olunzima lwesifo sikashukela kuyanconywa ukuba bakhethe amamodeli wasekhaya anephutha lide le-10-13%. Ukusuka kumishini yezokwelapha engabizi, kunconywa ukuthenga "iSatellite" yaseRussia, "Omelon" noma "Diaconte".
Yini okufanele uyibheke lapho ukhetha i-glucometer?
Lapho unquma ukuthi imitha inembe kangakanani, naka iphutha lokulinganisa. Lesi sici silingana nomehluko phakathi kokufundwa ushukela ekuhlolweni kwelebhu nokuhlaziya okwenziwa yidivayisi. Ezigulini ezitholakala zinesifo sikashukela sohlobo 2 futhi zingathathi i-insulin, ngisho nokuphambuka okuncane kuholela emiphumeleni ebulalayo. Ngakho-ke, i-glucometer yesifo sikashukela mellitus 2 ibonakala ngephutha lokungabi ngaphezu kwe-10-15%.
Endabeni yohlobo lwe-1 yesifo sikashukela kanye nengozi ye-hypoglycemia, kuyadingeka ukuthi okufundwayo kube ngokunembile, ukunemba kokufundwa kwensiza kufanele kube kuncane. Ukunemba kokulinganisa akufanele kudlule i-5%. Amapharamitha wokuqhathanisa nawo abalulekile, awahlobene ngqo nokuhlaziywa, kepha athinta ukusebenza kwensiza:
Umsoco Naka uhlobo lwamabhethri ithuluzi elinikwa lona nokuthi yimalini etholakalayo ukuze imitha "ingashisi" okwamanje.
Isitoreji. Ungalugcina kuphi futhi kanjani lolu cingo, ngasiphi izinga lokushisa nomswakama olungamukeleki ukusebenzisa, yiziphi izinto ezingezekile ezingaphandle ezilimaza imishini noma izingxenye zayo.
Ukufundiswa Incazelo eningiliziwe yedivayisi, itafula lezinkomba, i-algorithm yokubuyisela imichilo yokuhlola namakhasethi ezigubhu.
Isikhombisi esibalulekile sekhwalithi yemitha yisikrini, esihlukaniswe ngesikrini sokuthinta noma i-LCD, emnyama nomhlophe noma ngombala. Kubantu asebekhulile nabangaboni kahle, isikrini esinamanani amakhulu acacile, kubalulekile. Kuyinto efiselekayo ukuthi isikrini singamelana nomswakama kanye ne-shockproof. Lapho ukhetha idivaysi enesikrini sokuthinta, ungadinwa kakhulu ukubheka ukuthi isabela kanjani uma uthinta, nokuthi ingabe izilawuli zokuthinta zitholakala kalula yini.